In ay suuqa ugu software cusub uu noqon karaa mid cajiib ah oo niyad-jab. Yaa markii gooniga ah iyada oo daraasiin ka mid ah fursadaha software, dib u eegista iyo astaamaha, si loo ogaado oo iyaga ka mid ah ku faantaa faylalka tacliimeed ee ugu wanaagsan guud ahaan hufnaan, qiimaha iyo muuqaalada? Si kale haddii loo dhigo, taas oo iyaga ka mid ah waxay leedahay utility ugu wanaagsan ee saamiga qiimaha? Marka ay timaado oo barnaamijyo ku haboon biilka marka ay timaado wareejinta content iPod kombiyuutaro, waxaan soo qaaday xorriyadda sameeyo legwork ah.
Eeg burburka soo socda si aad u aragto ugu sareeya 12 barnaamijyo ku haboon kala iibsiga iPod-to-computer.
Transfer 6.ImTOO iPod Computer
8.Phone in PC (formerlly xilkii guddoomiyenimo si PC)
9.Phone si Mac (formerlly xilkii guddoomiyenimo si Mac)
Senuti waa codsi ah mid aad u fudud in la isticmaalo in heeso ka qalab Apple oo kale ah iPod ama iPhone gudbin doona computer Apple ah. Waxaad dareemi doonaa magacan hal abuur leh, "Senuti" waxaa si fudud Lugood gadaal loo higgaadiyo.
Faa'iidada Waa cajiib degdeg ah oo hufan. Its interface fudud ayaa sheegay "Waxaan halkaan u joogaa inaan hal wax oo ay tahay in sameeyo walax." Waxaad ma arki doono barwaaqoobi kasta ama flash, barnaamijkan waxaa diiradda lagu saaray mid ka mid ah wax, xawaaraha. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan songs metadata, video iyo Nayroobi. Sidaas qalab tani waa adag oo awood leh.
Faa'iidodaro Limited interfacing kaliya ee nidaamka OS Mac.
Rasmiga URL: Download Halkan
CopyTrans waa mid aad u fudud in la isticmaalo software si ay u gudbiyaan si PC desktop ah.
Faa'iidada CopyTrans runtii waa wax software cajiib ah. Iyada oo isu diyaariyeen inay ka buuxo oo muuqaalada durugsan, wareejinta lagu kalsoonaan karo iyo fursadaha u wareejinta metadata, CopyTrans bixisaa nooca isku halaynta in mid ka mid filan waa iyo raadiyo in software u Apple macluumaadka sheyga kala iibsiga. Waxa kale oo ay qiimo dhimis gorgortan ah!
Faa'iidodaro ma Run ahaantii waa wax badan jidkii taageero iBook. Oo intuu xawaaraha kala iibsiga waa deg deg ah, waxaa jira software on suuqa oo bixiya xawaaraha si dhakhso ah aan wax u dhimin sharafta.
Waxaan aad u badan sida interface ee iPod Rip, waxa ay leedahay design hurdo la naqshadeynta diyaar-to-akhrin, si sahlan loo raaco iyo muuqaallada ah. Geedi socodka dhan min biloow ilaa dhamaad waa cajiib dareen leh.
Faa'iidada Waa mid aad u degdeg ah
Faa'iidodaro Tani taageeri ma kala iibsiga metadata oo ma taageeri iPads tufaax ah. Haddii ay dhici waayaan taageerada wax soo saarka Apple software this si deg deg ah ku dhici doonaan duugaas.
Hubaal waxa tani ugu adag ee barnaamijyada kala iibsiga, bixiya muuqaalada xad-dhaaf ah iyo fursadaha kala iibsiga. Waxaa qurux badan oo fudud oo ay taageertaa guud oo dhan spectrum Apple. Kani waa barnaamij oo quruxsan oo dareen leh.
Waxay nafteeda suuqa sida ugu dhakhsaha fudud oo lacag la'aan ah. Oo taas, ay run sheegaysaan. Waxaa jira wax racfaan ah oo ku saabsan fudud marka dhan aad u baahan tahay ama aad doonayso waa mid fudud. Laakiin free yimaado qiimo weyn.
Faa'iidada Waa lacag la'aan ah oo saas samayn doona wareejinta aasaasiga ah ee music aad PC ama Mac ka iPod ah.
Faa'iidodaro Waxaa gebi ahaanba ma jiraan qaababka metadata iyo taageero u iPads.
Fadhiday $29.95 this software celcelis ahaan sicir keena la interface ah beatiful iyo jeer kala iibsiga deg deg ah.
Faa'iidada Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada kala iibsiga yar oo ka shaqaysa iBooks oo taageeri doonaa iPads. Waxaa sidoo kale ku wareejin doonaa qaababka ugu metadata. Tani waa xirmo adag in daryeeli doona inta badan baahida suuqa kala iibsiga aad
Faa'iidodaro Inkasta oo aanu iPads taageero, waxa ay leedahay dheeraad ah $ 40 lacag kaliya si ay u sameeyaan in ay suurtagal tahay. Waxaa intaa dheer, waxa aanu ku wareejin play dacwadood oo ratings, taas oo bummer ah qiimaha.
Ma rabtaa in aad si ay u gudbiyaan music? Waa hagaag tani macno ahaan waa feature kaliya in software uu leeyahay. Haddii aad u baahan tahay software ugu barebones inay sameeyaan suuqa ugu fudud, taasi waa.
Faa'iidada ku wareejinaya music xawaare tayada.
Faa'iidodaro Tani waa software runtii featureless. Ma aha mid xoogan oo dhan oo sameeya kaliya ee aasaasiga ah. Haddii aad rabto in muuqaalada haba yaraatee, tani ma aha in aad u.
Waxa waxa uu sheegaayo. Waxaa ku wareejinaya music, video, iBooks iyo metadata kale. Iyadoo version tani si gaar ah loogu tala galay PC ee, ay timaado dhibaatooyin badan oo aad u.
Faa'iidada Waa software xooggan leh iyo qurbaanno badan oo badan oo la sii wadin taageerada. Waxa ay taageertaa dhammaan qaabab iyo waxyaabaha Apple.
Faa'iidodaro Waxaa si fudud ma aha in si fudud ah si ay u fahmaan interface. Waxa aanu shil inta badan ee doonyaha u taageero oo kuma wareejin karaan iBooks.
Waxa waxa uu sheegaayo. Waxaa ku wareejinaya music, video, iBooks iyo metadata kale. Iyadoo version tani si gaar ah loogu talagalay Mac, laakiin ku faantaa dhibaatooyinka la mid ah, nasiib daro, sida dhigiisa PC ay.
iRip waa mid ka mid ah software ugu wanaagsan ee suuqa, iyadoo xawaare weyn iyo dhammaan qaababka mid u baahan doono, software waxa uu leeyahay awooda uu ku noqon tiro ka mid haddii wax yar oo ka reeban yihiin la daryeelo.
Faa'iidada Tani waa mid ka mid ah baakadaha software ugu fiican fekrado on suuqa. Waxaa ku wareejinaya wax walba, oo ay ku jiraan iBooks dhif-to-ka heli.
Faa'iidodaro marka laga reebo kaliya ee waa in ratings song ma wareejiyo. Haddii metadata ka go'an yahay in waxa ka mid ah, waxaa ka mid ah software ugu adag laga heli karaa uu noqon lahaa.
Developer: The app Factory yar
Tani waa aasaasiga ah weli buggy.
Faa'iidada Waxa ay leeyihiin faa'iido sameeyo wareejinta iBook iyo bedelaada kale ee aasaasiga ah.
Faa'iidodaro Halkaa marka ay marayso waxaa ka shaqeeya la cayayaanka aad u badan oo uusan xamili arrimaha murugsan sida maktabadaha badan Lugood. Iyada oo wax yar ka taageero dheeraad ah iyo muuqaalada ku daray, taas tiro 1 si deg deg ah u noqon karta.
Tani waa Jack-of-dhan-Xirfado marka ay timaado muuqaalada. Waxa ay wax walba.
Faa'iidada aan Waxaad ka heli doontaa software suuqa ah in ka badan sameeya. Waxaa ku wareejinaya fariimaha qoraalka ah, farriinta, metadata iyo waxyaabo kale oo dhan.
Faa'iidodaro interface gimmicky daryaan gebi ahaanba loo baahnayn waa qabsaday baaritaan ku software this. Wareejinta Pretty gaabis ah sidoo kale.
Developer: Wide Angel Software
Sidee si ay u gudbiyaan Windows in A New Hard Drive
> Resource > Transfer > Top 12 iPod in Lugood ama Transfer Computer Software